Indawo eJamani | Uhambo lokuhamba ... | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Ubume kunye nemimandla eJamani
Iifoto zezinto eziseJamani
IRiphabhliki yaseJamani yaseJamani iye yaziwa ngokugqithiseleyo njengendawo yokuvakatyelela iminyaka emininzi. Oku kubangelwa kakhulu kwiindawo zokuthutha ezintle kwiziko kunye neentlobo zezinto ezithandayo. Ingaba abahlali bexesha lokuzonwabisa, inkcubeko okanye abathandi bemvelo, wonke umntu ufumana imali yakhe kweli lizwe.
Ukuba ukhangele iimyuziyam eziphakamileyo, iindawo zokutyela ezigqibeleleyo kunye namathuba amaninzi okubhiyozela, tyelela enye yezixeko ezine ezinkulu: eBerlin, Hamburg, Munich naseCologne. I-Berlin akungabazeki ukuba i-metropolis yenkcubeko yelizwe kwaye ixakeke nakwiindwendwe eziqhelekileyo ngokuphindaphindiweyo kunye nomoya wazo ovuyokileyo, wokudala.
Jamani - Alte Oper, Frankfurt am Main
I-Hamburg, kunye ne-Speicherstadt eyaziwayo emhlabeni, inika i-luxurystad, ngeli xesha i-Munich, intliziyo yaseBavaria, ikucela ukuba uhambe uhambo oluya kuyo. I-Cologne iyakhupha i-Rhineland ubuhlobo kunye neCologne Cathedral, isakhiwo esityelele kakhulu kwilizwe.
EJamani unokuphanda iiminyaka ezidlulileyo kwisiseko seempahla ezininzi. Kuyo yonke indawo kukho imizila yamaRoma, njengamabhafu kunye namanzi. Eyaziwa kakhulu apha apha ngumzekelo we-Trier no-Xanten.
Ukongezelela, ilizwe libonelela ngamasonto amaninzi amaninzi. Ngokukodwa i-Frauenkirche eDresden kunye ne-Aachener Dom baye bafumana igama elizwe ngamazwe. Ngesakhiwo saso samatye okanye i-Renaissance izakhiwo, zimelela ubungqina obukhethekileyo bezakhiwo ze-sacral.
I-Middle Ages nayo imele imele: IJamani iyaziwayo ngeenqaba zayo ezininzi kunye neendonga zeendlovu, ezibuyiselwayo kunye nokufumana ingqalelo enkulu. Nazi iinqaba ezikufutshane neRhin neMoselle ukubiza.
Izidiliya kunye neendlela zokuhamba ngokujikeleza imilambo emibini ziphakathi kwezinto ezithandana kakhulu neli lizwe, ukudibanisa ukufikelela okulula ukukhangeleka lula. Ngakolunye uhlangothi, i-Neuschwanstein Castle, emele imhlophe kwaye ihlonipheke entabeni ephakamileyo enqabileyo yaseBavaria, ikhangeleka njengento entsha.
Kodwa nabahambi abafuna ubuhle bemvelo, musa ukuphuma eJamani ngaphandle. Kukho inani leepaki zeSizwe ze-16, yiphi indlu eyahlukileyo kwimimandla kunye neendawo eziphilayo.
Abathathu babo bahlanganisa i-Wattenmehr eyaziwayo ehlabathini ngasenyakatho yelizwe, apho ukuhanjiswa okukhokelo kunokwenziwa khona.
Kubalandeli beentaba zeentaba, iPaki yeSizwe ye-Eifel, apho iindawo ezinokuthi zibukeke ngayo, kwaye iSaxon Switzerland kunye ne-Elbe sandstone formations iyakulungeleka. Okokugqibela, ubuninzi beepaki ezizwe zibandakanya amahlathi amnandi kunye namahlathi amakhulu, umzekelo kwiHarz, Black Forest okanye Hunsrück.
Izwe ligqibelele kubafundi bezithombe kunye nabathathi bezithombe. Oku akukona nje ngenxa yemozulu emnandi, kodwa nakwiinjongo ezininzi ezahlukeneyo ezinokufumaneka. Ekugqibeleni kuncinci, kunokwenzeka ukufumana iinxalenye zokugcina kunye neencedisi phantse kuyo yonke indawo, kwaye iifoto zinokuphuhliswa kwisayithi ngexesha elifutshane kakhulu xa lifuneka.
Isango laseBrandenburg, eBerlin
Intaba yaseRhin neLoreley
I-Aachen Cathedral, iNdawo yeLifa leMveli
Idolophu endala, iLimburg an der Lahn
I-Cathedral, iLimburg an der Lahn
I-Cathedral, eFrankfurt am Main
Uhambo lwelizwe laseKhanada - Ukuhamba ngeNtshona yeKhanada
Bundeskanlzer kunye noMongameli we-Federal of ...
Imibala yokubala eJamani